यसकारण अखिल क्रान्तिकारीका सचिव गणेश पौडेल एमालेमा पसेका रहेछन् ! – ebaglung.com
२०७३ चैत्र १७, बिहीबार १९:१४	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार 1 comment
प्रेम सुनार, गुल्मी , २०७३ चैत १७ । नेकपा माओवादी माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका सचिव गणेश पौड्यालले आफुलाई नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको भन्ने समाचारको खण्डन गरेका छन् । उनले विज्ञप्ती प्रकाशित गरी मलाई कुनै संगठनमा प्रवेश गरेको भनि सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चार माध्यमा आएको समाचारको खेद व्यक्त गर्दै आफु नेकपा माओवादी केन्द्रको शुभेच्छुक संगठन अनेरास्वीयु (क्रान्तिकारी ) मै कटिवद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यही कुरा पुर्वमन्त्री विष्ट संग राख्न जाँदा विष्ट र उनका कार्यकर्ताहरले पार्टी प्रवेश गरे तिन दिनमा उनको आफन्तलाई उद्धार गरिने प्रलोभन देखाएका थिए र अविर टिका समेत लगाई दिएका थिए । अविर टिका लगाई दिएको केहि वेरमै माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा आएर एउटा नेपालीको उद्धार गर्न राजनैतिक निष्ठा खरिद विक्रि ? विपदमा परेका जनताको उद्धार गर्न र राज्यको रकमबाट गाउँको विकास गर्न एमाले बन्नै पर्ने ? जस्ता सवाल उठाउँदै पौड्यालले माओवादी केन्द्रका नेताहरु समक्ष विज्ञप्ती लेखेको त्यस कार्यालय श्रोतले जनाएको छ ।
ठक्करको जिन्दगी अक्करको राजनीती
विपद परे पछि हर कोही नेता संग गुहार माग्नु हरेक नेपाली जनताको बाध्यता बन्न पुगेको छ । एक हातमा समस्या अर्को हातमा पार्टी सदस्यता नेपाली सर्वसाधरणको बाध्यता । त्यही बाध्यताका प्रतिनिधी पात्र बने पौड्याल पनि । दुई वर्ष अघि उनका भिनाजु सउँदी अरवमा एउटा घटनामा फसे । अर्घाखाँचीको अर्घातोष–१ का उदय अर्याल उनका भिनाजु हुन् । उनि सउदी अरवको जेलमा दुई वर्ष देखि रहेका छन् ।
घरमा दिदीको रुवावासी शान्त हुन्छ भने ठिकै छ नि अविर टिका लागाउँदैमा मेरी दिदीको आँशु पुछिन्छ भने एक् छिन के विग्रन्छ र ? जस्तो पनि मनमा लाग्यो । टिका लगाउन साथ मेरो राजनैतिक निष्ठा र घरयासी विवसताले मलाई पिरल्यो । म भावुक हुँदै आफ्नै पार्टी कार्यालय माओवादी केन्द्रमा आई मेरा नेताहरुलाई वोलाएर विज्ञप्ती लेखेको हुँ ।’
म आजै राती अर्घाँखाँची स्थित घर जान्छु । निकै दवाव आएको छ फोन पनि आफ गर्छु । त्यसो भनेका पौड्यालको आज सम्म पनि अफ रहेको छ । उनको त्यो अवस्था र विवसता बुझ्दा यो देशका गरिव जनता देश विदेशमा ठक्कर पाउँछन् र यहाँ अक्करको राजनितीमा फँस्न विवस हुन्छन् भन्ने देखाएको छ । एमाले श्रोतले भने स्वतस्फुर्त पौड्याल पार्टी प्रवेश गरेको जनाउँदै विभिन्न सञ्चार माध्यमा समाचार सम्पे्रषण भएको छ । उनले उक्त विषयमा लिखित कागज पत्र समेत गराईएको समेत जनाए पनि उक्त कागज भने उपलव्ध गराएका छैनन् ।
राप्रपाले चौध अन्चल ईन्चार्ज तोक्यो, धौलागिरी इन्चार्जमा गौचन !
March 31, 2017 at 3:48 pm -
यस्ता 2पैसे नेताको पनि गुनगान !!!!! छोरा छोरिको मात्रै होइन आफुले शरीर फाल्न पनि तयार हुनु पर्ने नेता म बाध्यतामा गायको थिय अहिले फर्किय रे थुक्क कायर !!!! देश र जनताले यस्ता थुक्से लगौटी नेताबाट के आसा गरौ !!!!!